Raw Boldenone Acetate powder (2363-59-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Prohormone / Boldenone Acetate powder
SKU: 2363-59-9. Category: Prohormone
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gramu kusvika mukuraira kweBoldenone Acetate powder (2363-59-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Boldenone acetate imwe yerudzi rweBoldenone. Ndiyo anabolic androgenic steroid inoshandiswa ne-acetate ester. Esters inokanganisa kushandiswa kwechirwere ichi uye hafu yehupenyu kana urefu hwemazuva zvinodhaka zvinoratidzira basa rayo rinotarisirwa kana basa riri mumuviri.
Raw Boldenone Acetate powder kushandiswa mu steroid cycle
Raw Boldenone Acetate powder Mazita
Boldenone Acetate inozivikanwawo se "shoma inoshanda Equipoise", Bold Ace, Bold A.
Boldenone Acetate Raw powder Usage
Boldenone Acetate inofanira kushandiswa pa 300-700mgs / vhiki nekujaira kunoitwa zvishoma nezvose 2-3days
Warning on Raw Boldenone Acetate powder
Nokuda kwekurwadziwa kwemajeri, Boldenone Acetate inoonekwa sezvinhu zvinorwadza zvakanyanya kuti zvive zvakanaka. Izvo zvinokosha zvakanyanya steroids kushandisa, nokuti kuputika kwepachivirira marwadzo kunogona kukanganisa kushanda, kuchaita kuti musuru iwe ujowe ureru kwemazuva mazhinji, kunyange kutamba kwekudzimba uye kubwinya.
Raw Boldenone Acetate powder Zvimwe mirayiridzo
Kufanana nedzimwe vana anabolic steroid, Boldenone Acetate inowanzoita kuti kuve nekukwira kweropa rekuyera ropa. Uye vamwe vashandisi vanotaura kuti inoshanduka mukudya, kumuka usiku inzara nenzara. Zvimwe zvinokonzera, zvakadai sokuwedzera kushungurudza, mazinya, ganda rehuori uye kurasikirwa kwevhudzi. Saka vakadzi vanofanira kunyatsongwarira kana vachida kushandisa Boldenone Acetate, uye chete inoderedza madheji.
Nzira yekutenga Boldenone Acetate powder kubva kuAASraw
1. Kuti tibatane nesu nemu email yedu yekutsvaga, kana kuti mupepeti wekudenga skype mumiririri webasa (CSR).
2. Kutipa iyo yako yakawanda yakabvunzwa nekero.
3. Yedu CSR ichakupa iyo quotation, nguva yekubhadhara, nhamba yekutevera, nzira yekuendesa uye inofungidzirwa zuva rekuuya (ETA).
4. Mutero wakaitwa uye zvinhu zvinotumirwa mumaawa e12 (Kuronga mukati me10kg).
5. Nhumbi dzakagamuchirwa uye dzinopa mhinduro.
KUNYANYA kunopa hutano 98% Boldenone Acetate poda yakasvibirira kuti vashandi vemuviri kana pasi pasi mabasa ekushandisa kusakirwa. .
Rated 2.00 kubva 5
Rated 2.60 kubva 5
Rated 3.36 kubva 5
Chiremba anesthesia series (1)
Orlistat Inoshanda Sei Seweya Wekurasikirwa Zvinodhaka?